Mucaaradku yaanay yeelin gudi aannu Silaanyo ku jirin hadii uu dalka xukumo by Abdi Mustafe‏
Mucaaradku yaanay yeelin gudi aannu Silaanyo ku jirin hadii uu dalka xukumo by Abdi Mustafe‏ 0 July 22, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 459
Mucaaradku yaanay yeelin gudi aannu Silaanyo ku jirin hadii uu dalka xukumo by Abdi Mustafe‏ Salaadiinta isku deyeysa inay dhex-dhexaad ka gasho muranka taagan yaanay gudida xukuumadu soo dirayso Silaanyo ka reebin. Hadii kale oo uu ka maqanyay cida la soo diro waxba ka qori mayso madaxtooyadu. Waxa suurta gala waxa gudidu soo gaadho in aan Silaanyo cidiba ogeysiin ee meel dhexda ah laga diido oo xukunku dumargacanta ku hayaan. Silaanyo haduu caafimaad qabo waa in la soo gola fadhiisiyaa hadii kale wax is bedelayaa ma jiraan. Awal ba heshiis baa la galay hadana wuu socon waayay maxay taraysaa hadii kii oo kale lagu noqdo. Arinka askarta meel walba lagu daadiyey na shicibka waxba kama qaban karaan cid carartana Silaanyo iyo qoys kiisa ayaa uugu horeynaya. Hore ayaa dalkan askar iyo qori loogu xukumi kari waayay. Waagii SNM ay xabashidu tidhi ama naga baxa ama waannu idin xidh-xidhaynaa ee ay af-weyne la heshiiyeen waakii Silaanyo ku waashay intaan dalka ka tegayo isuga oo dagaal ha ridina dabeed waa kii London u cararay. Isku soo xoorioo cidi qorika baqan mayso oo waa la ogyay ee maanta waa inay cadaataa cida dalka xukuntaa. Askartani waxay dadka xasuusinaysaa faqashti, maxaa se kalifay inay ciidamadii xuduuda joogay u yeedhaan sow cabanaan iyo baqe ay shicibka ka qabaan maaha. Maanta waa in gun laga gaadhaa cida dalkan xukunta cidna qori lagu heysan maayo e.